Wararka – Page 5 – Radio
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo maanta cod u qaadaya Miisaaniyada sanadka 2019ka
December 30, 2018	23	Like
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa lagu waddaa in oo Axad ah Taariikhduna tahay 30/12/2018, kulan ku yeeshaan xaruntooda Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho. Ajendaha kulan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ah u codeynta Miisaaniyadda Dowladda ee sanadka 2019-ka. Sidoo...
December 29, 2018	40	1
Ujeeddo: Codsi Qandaraas Hay’adda Bisha Cas ee Gobolka Mudug, waxa ay doonaysaa in ay Haan u dhisto ceelka tuuladaKuweeyt ee Degmada Galdogob. Haddaba Qandaraaslayaasha danaynaya in ay kaqaybgalaan tartanka Haantaan, waxaa laga doonayaa in ay yimaadaan Xarunta Bisha Cas eeGaalkacyo,...
December 29, 2018	37	Like
Request for Construction of 1 Elevated Tank for Community Borehole Introduction As part of Hunger Resilience Project and building community resilience initiative, the Somali Red Crescent Society (SRCS) Galkayo Branch is implementing food security, Livelihood and WASH activities in Mudug...
10 sanno ka hor maanta oo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf ayaa is casilay
December 29, 2018	22	Like
Toban sanno ayaa laga jooga markii maanta oo kale madaxweynihii dowladda kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, Cabdullaahi Yuusuf Axmed is-casilaaddiisa ka horjeediyay Baarlamaanka oo xilligaas fadhigiisa ahaa Baydhabo. Waxaa uu marka sabab uga dhigay is-casilaaddiisa dhowr qodob oo kala ah in...
December 29, 2018	18	Like
Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta oo ay tahay 29-ka bisha 12-aad 2018 xukun dil toogasho ah ku fulisay Maxamed Aadan Cali Booroow oo horay maxkamadu ay sheegtay in uu sheekh Caan ahaa dil ugu...
Puntland oo deegaanadeeda ka mamnuucday masuuliyiinta DF inta ay socoto doorashada.
December 29, 2018	24	Like
Wasaarada amniga Puntland ayaa soo saartay go’aano culu culus oo looga hadlayo amaanka guud ee doorashada Puntland. Warqad kasoo baxday wasaarada amniga iyo DDR-ta Puntland ayaa lagu sheegay in gabi ahaan deegaanada Puntland laga mamnuucay in ay yimaadaan masuuliyiinta dowlada...
December 29, 2018	17	Like
Shabaab ayaa sheegtay in dagaal culus dabadeed ay u suurta gashay in ay la wareegaan gacan ku heynta deegaanka Goof Gaduud Buureey oo duleedka kaga beegan Magaalada Baydhabo. Waxa ay sheegeen in dagaal qorsheysan ay kusoo qaadeyn saakay aroortii ayna...
December 29, 2018	16	Like
Markabka ay maamusho hay’adda gargaarka ee Gacmo furan ee dalka Spain ayaa goor sii horeysay oo tdodobaadkaani ah xeebaha Libya kasoo badbaadiyay boqolaal Muhaajiriin ah oo naftooda halis u galiyay sidii ay ku gaari lahaayeen wadamada Yurub. Muhaajiriintaasi oo u...
Xulufada Sacuudiga uu hogaamiyo oo duqeyn ka geystay dalka Yemen
Xulufada uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa duqeymo ka geystay dekada Xudeyda oo ay ku xooganyihii xuutiyiinta Yemen ka dagaalama, waxaana duqeyntaani ay kusoo aadaysaa iyadoo xabad joojin lagaga dhawaaqay Yemen. Duqeyamanahaan ayaa sidoao kale lala beegsaday xaafada Al Qaabiyah ee degmada...
December 29, 2018	14	Like
Rag bastoolado ku hubeysan ayaa ku diley magaalooyinka Afgooye iyo Boosaaso askar iyo haweeney rayid ah kadibna baxsaday. Goobjoogayaal ayaa saxaafada u sheegay in saddex askari oo canshuur ka aruurinayay Suuqa magaalada Afgooye gaadmo lagu diley, waxaana rasaasta askartaasi lagu...
November 22, 2018	67	1